Weeraro Culus Oo Ka Dhacay Magaala Madaxda Gobalka Helmand. – Bogga Calamada.com
Weeraro Culus Oo Ka Dhacay Magaala Madaxda Gobalka Helmand.
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan howlgalo xiriir ah ay ka fuliyeen magaalada Lashkar Gaah oo ah caasimadda gobalka Helmand ee dalkaasi.
Weerarka ayaa isugu jiray Camaliyad Istish-haadi ah iyo dagaal toos ah oo ciidamada Mujaahidiinta ay la beegsadeen difaacyo maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Afghanistan ay ka sameysteen gudaha magaaladaasi.
Websaydka Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa baahiyay in Camaliyaddaasi Istish-haadiyada ah lagu dilay 21 ka tirsan saraakiisha iyo maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Afghanistan kuwaasi oo uu ku jira sarkaalk sare oo lagu magacaabi jiray Kallaa Mullaah.
Sidoo kale Camaliyaddaasi waxaa lagu dhaawacay 18 kale oo ka tirsan maleeshiyaatka maamulka daba dhilifka Afghanistanâ€™iyadoona sidoo kale camaliyadda ay burburisay tiro gaadiid dagaal ah.
Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ayaa gudaha u galay magaalada Lashkar Gaahâ€™iyagoona dagaal culus ku qaaday saldhigyada iyo difaacyada maamulka daba dhilifka Afghanistan ay ka sameysteen magaaladaasdi.